HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Koreanina Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Litoanianina Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sena Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Angoley Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshwa Turkmène Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Zapoteky (Andilan-tany)
Nanaiky an-tsitrapo hanao fahirano an’i Jerosalema i Ezekiela
INONA no itovizanao amin’ny mpaminany fahiny? Toy izao no atao hoe mpaminany, araka ny Fandalinana ny Soratra Masina: “Olona mampahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra sy ny fikasany [na] mpampita hafatra lazaina fa avy amin’Andriamanitra.” Mety ho filazana ny hoavy ilay hafatra. Mpitondra tenin’Andriamanitra koa anefa ny mpaminany, ka mampahafantatra ny fampianarany sy ny didiny ary ny didim-pitsarany. Toy izany koa fa mitondra ny tenin’Andriamanitra ianao rehefa mitory, na dia tsy mpilaza ny hoavy aza.—Mat. 24:14.
Voninahitra lehibe ny mitory momba an’i Jehovah Andriamanitsika, sy mampianatra hoe inona no sitrapony. Miara-miasa amin’ilay ‘anjely manidina eny afovoan’ny lanitra’ isika. (Apok. 14:6) Mety hanadino an’izany anefa isika rehefa reraka, na kivy, na mahatsapa ho tsy misy vidiny, na tojo olana hafa. Reraka, na kivy, na nahatsapa ho tsy nisy vidiny koa ny mpaminany fahiny. Tsy nilavo lefona anefa izy ireo, ary nampian’i Jehovah hamita ny asa nanendreny azy. Hodinihintsika izao ny nataon’ny mpaminany sasany sy ny fomba hanahafantsika azy.
NIEZAKA MAFY DIA MAFY IZY IREO
Mety ho reraky ny asa aman-draharaha andavanandro isika indraindray ka tsy te handeha hanompo. Marina fa mila maka aina isika, toy ny nataon’i Jesosy sy ny apostoly. (Mar. 6:31) Diniho anefa ny ohatr’i Ezekiela tany Babylona. Namita iraka teo amin’ireo Israelita babo avy tany Jerosalema izy. Nasain’i Jehovah nosoritany teo amin’ny biriky iray ny sarin’ny tanànan’i Jerosalema. Nasainy nandry 390 andro tamin’ny ilany havia koa izy, ary 40 andro tamin’ny ilany havanana, ka toy ny hoe nanao fahirano an’ilay biriky. Hoy i Jehovah taminy: “Hofatorako amin’ny tady ianao mba tsy hahafahanao hivadi-mandry, mandra-pamitanao ny andro anaovanao fahirano azy.” (Ezek. 4:1-8) Tsy maintsy ho gaga ny Israelita tany an-tsesitany nahita an’i Ezekiela niaritra ny mafy toy izany nandritra ny herintaona mahery. Ahoana no nahavitan’i Ezekiela an’izany?
Fantatr’i Ezekiela ny antony nanirahana azy ho mpaminany. Hoy mantsy i Jehovah taminy: “Na hihaino [ny Israelita] na tsia, ... dia ho fantany tokoa fa efa nisy mpaminany teo aminy.” (Ezek. 2:5) Notadidin’i Ezekiela foana izany, ka nataony an-tsitrapo ilay zavatra nampanaovin’i Jehovah azy. Mpaminany tokoa izy. Tatỳ aoriana, dia nisy nilaza taminy sy tamin’ny Israelita tany an-tsesitany hoe: “Rava ny tanàna!” Hitan’ny Israelita àry fa tena nisy mpaminany teo aminy.—Ezek. 33:21, 33.
Mampitandrina ny olona isika ankehitriny hoe ho rava ny tontolon’i Satana manontolo. Mety ho reraka isika, nefa mikely aina mitory ny Tenin’Andriamanitra sy miverina mitsidika ary mampianatra Baiboly. Isaky ny misy tanteraka ny faminaniana momba ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity, dia afa-po isika fa anisan’ireo “mampahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra sy ny fikasany.”
TSY NANAIKY HO KIVY TANTERAKA IZY IREO
Miezaka mafy dia mafy isika sady ampian’ny fanahin’i Jehovah. Mety ho kivy anefa isika indraindray rehefa tsy mandray na manohitra ny olona torintsika. Tadidio àry i Jeremia mpaminany. Nesoin’ny Israelita sy noharabiny izy satria nitory ny hafatr’Andriamanitra. Hoy mihitsy izy indray mandeha: “Tsy hiresaka momba azy intsony aho, na hiteny amin’ny anarany.” Nitovy fihetseham-po tamintsika i Jeremia nefa nitory foana. Hoy mantsy izy: “Toy ny afo mirehitra ato am-poko anefa ny teniny, eny, toy ny afo mirehitra voahidy ao amin’ny taolako. Sasatry ny mihazona izany aho, ary tsy vitako ny miaritra izany rehetra izany.”—Jer. 20:7-9.
Tsara àry ny misaintsaina an’ilay hafatra torintsika, raha kivy isika fa tsy mandray na manohitra ny olona torintsika. Ho toy ny ‘afo mirehitra voahidy ao amin’ny taolantsika’ koa izy io. Hirehitra foana ilay afo, raha zatra mamaky Baiboly isan’andro isika.
NANAIKY AN’ILAY FANENDRENA IHANY IZY IREO
Misy Kristianina mitebiteby rehefa tsy hainy hoe ahoana no hanaovana ny asa anendrena azy, ary nahoana izy no asaina manao an’ilay izy. Nety ho hoatr’izany no tsapan’i Hosea mpaminany. Hoy i Jehovah taminy: “Mandehana ianao maka vady izay hijangajanga, dia hahazo zanaky ny fijangajangany ianao.” (Hosea 1:2) Ahoana raha hanambady ianao nefa ilazan’i Jehovah hoe hivaro-tena ilay ho vadinao? I Hosea kosa nanaiky, ka nalainy ho vady i Gomera, ary nitera-dahy izy ireo. Niteraka vavikely sy lahikely i Gomera tatỳ aoriana. Toa tsy zanany tamin’i Hosea anefa izy dahy fa zanany tamin’olon-kafa. Efa nilazan’i Jehovah i Hosea fa “hanenjika an’ireo lehilahiny” i Gomera. Tsy iray monja àry ny lehilahiny! Nitady hiverina tany amin’i Hosea izy avy eo. Raha ianao no Hosea, mbola ho noraisinao ve izy? Izany mihitsy anefa no nasain’i Jehovah nataon’i Hosea. Mbola novidiny lafo koa aza i Gomera.—Hosea 2:7; 3:1-5.
Mety ho nieritreritra i Hosea hoe nahoana izy no nila nanao an’izany rehetra izany. Nataony ihany anefa ilay izy, ka lasa tsapantsika ny alahelon’ilay Mahery Indrindra rehefa nivadika taminy ny Israely. Nisy koa Israelita tso-po niverina tamin’Andriamanitra.
Isika kosa tsy asain’i Jehovah “maka vady izay hijangajanga.” Inona anefa no azontsika ianarana avy amin’i Hosea? Tokony ho vonona hitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana “ampahibemaso sy isan-trano” isika, na dia sarotra amintsika aza izany. (Asa. 20:20) Mety ho sarotra aminao tokoa ny fomba fitory sasany. Maro tamin’ny olona nampianarin’ny Vavolombelon’i Jehovah no nilaza fa tiany ny mianatra Baiboly, saingy tsy hitory isan-trano mihitsy izy. Vitany ihany anefa ny nitory tatỳ aoriana. Ho vitanao koa àry izay zavatra mety ho hitanao hoe sarotra.
Misy zavatra hafa azontsika ianarana avy amin’i Hosea. Afaka nanda tsy hanao an’ilay zava-tsarotra nasaina nataony izy. Tsy ho nisy nahafantatra an’ilay izy, raha tsy nosoratany ilay tantara. Mety ho afaka hitory momba an’i Jehovah koa ianao, nefa tsy misy mahalala an’izany. Izany no nitranga tamin’i Anna. Mpianatry ny lise tany Etazonia izy. Samy nasain’ny mpampianatra nanoratra lahatsoratra momba ny foto-kevitra iray tena inoany izy sy ny iray kilasy taminy, ary avy eo nasaina nandresy lahatra an’ireo mpianatra hafa. Azon’i Anna natao ny tsy niresaka Baiboly tamin’izay. Tsapany anefa fa fanendrena avy amin’i Jehovah ilay izy ka nohararaotiny. Fantany fa hisy hanohitra izy. Nivavaka àry izy aloha ka vao mainka nazoto hanoratra an’ilay lahatsoratra. Izao no nataony lohatenin’ilay izy: “Misy Porofo ve fa Marina ny Evolisiona?”
Manahaka ny toe-tsain’ny mpaminany fahiny ny tanorantsika, ka sahy miaro ny finoany an’ilay Mpamorona
Novelabelarin’i Anna tamin’ny iray kilasy taminy ilay izy. Nametraka fanontaniana be dia be ny ankizivavy iray nino ny evolisiona, nefa voavalin’i Anna tsara daholo izany. Niaiky volana ilay mpampianatra ka nanome loka azy, satria izy no nahay nandresy lahatra indrindra. Niady hevitra imbetsaka momba ny famoronana i Anna sy ilay ankizivavy taorian’izay. Lasa sahy mitory ny vaovao tsara i Anna, noho izy nanaiky an’ilay “fanendrena” avy amin’i Jehovah.
Tahafo àry ny toe-tsain’i Ezekiela sy Jeremia ary Hosea, izay samy nahafoy tena, na dia tsy mpaminany aza ianao. Ho vitanao amin’izay ny manao ny sitrapon’i Jehovah ankehitriny. Azo dinihina mandritra ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana na fianarana samirery koa ny tantaran’ny mpaminany hafa fahiny sy ny fomba hanahafana azy.